NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE STRAWBERRIES BEZUSEY REMOBAN IYO STRAWBERRIES, SHARAXAAD IYO SAWIR - STRAWBERRIES
Strawberries waa berrito faa'iido leh oo macaan, kaas oo sidaas jecel carruurta iyo dadka waaweyn. Si ay ugu raaxeeysato dhadhanka, ma ahan daruuri lagama maarmaan u ah in lagu daboolo kaymaha si ay u raadiyaan muraayado qarsoon, sababtoo ah strawberries waa la kobcin karaa guriga. Nooca ugu caansan ee strawberry waa bezusaya remontant, noocyada ugu wanaagsan ee kuwaas oo leh noocyo kala duwan oo sifooyin wanaagsan. Waxay kaliya kuma farxi doonto iyada dhadhankeeda, laakiin sidoo kale waxay si quruxsan u qurxinaysaa dhulka.
Ma taqaanaa? Dib-u-hagaajintu waa fursad ah inay midho u dhasho dhowr jeer xilli.
Noocyo of bezopoy yar yar-fruited strawberries remwmant iyo strawberries
Bannaanka u badan ayaa doorbida noocyo duurjoog ah oo strawberries iyo strawberries. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dhammaan noocyada aan kala duwan ee labada strawberries iyo strawberries labada remontant. Si aan laguu dhicin, waa inaad isla markiiba sameysid ballan ah in farqiga u dhexeeya strawberries iyo strawberries ay tahay cabbirka oo kaliya. Pomologists (dadka wax ka barata noocyada kala duwan ee berry iyo noocyo miro), kala saar strawberries on yar strawberries remontant iyo on strawberries waaweyn remensive. Si aanad u hadlin iyo in aan la jaahwareerin muddo dheer, waxaa la aqbalaa in ay wacaan strawberries waaweyn oo si weyn loo jarjarey strawberries. Kuwa soo socda ayaa ah noocyada ugu caansan ee noocyada kala duwan ee strawberry:
Cudurka Strawberry "Alexandria" waxaa sii daayay shirkadda American "Park Seed Company" sannadkii 1964. Muuqaal ka mid ah noocyada kala duwan ee koritaanka - ilaa 20 cm dhererka dhirta qaangaarka, iyo sidoo kale berry aad u macaan iyo karti u leh miro laga bilaabo May ilaa October.
"Alexandria" waa dhir caano macaan, kaas oo mid ka mid ah berry miisaamaya celcelis ahaan 8 g. Hal xilli ciyaareed, noocyada kala duwan waxay ka helaan 400 g hal kaneer (qiyaas ahaan 50 berry midkiiba). Iyadoo loo eegayo xajmigeeda yar, noocyada kala duwan ee loogu talagalay taranta guriga. Bushku wuxuu u dulqaadanayaa dhaxan, weerarada cayayaanka iyo cudurrada.
Waa muhiim! Alexandria wuxuu dhali karaa miraha xitaa marka uu dhaxan yahay yar yar..
"Baron Solemakher" - mid ka mid ah fasalada ugu da'da ah ee remontantny. Berry wuxuu yaryahay, wuxuu leeyahay kiimiko kala duwan, waxaana lagu daboolay caleenta.
Ma taqaanaa? Berry wuxuu ku jiri karaa in ka badan 7% sonkorta..
Bannaanka "Solemakhera" waxay sameeyaan caws ubax xoog leh oo isku dhafan. Ubaxku wuxuu bilaabmaa sanadka ugu horeeya ee beereedka, isla markiiba wuxuu bilaabi doonaa in uu midho u dhalo ilaa inta uu dhaxanayo xilliga dayrta. Mid ka mid ah baadiyaha waxaa la goostin karaa ilaa nus kiilo keli ah, tanina waa xilliga xagaaga.
Kala duwanaanta noocaas ah waxay u baahan tahay ciidda leh fosfate heer sare ah. Waxay u dulqaadataa xagasha heerkulka iyo abaaraha. Cagaarshowgu wuxuu si fiican u dhalaalayaa hooska, waxaa la gelin karaa balakoonka ama windowsill. Ka dib saddex sano ah ee fruiting, baadiyaha wuxuu joojiyaa inuu midho u dhali, sidaas darteed waa inaad mar kale ku beeri.
Darajada "White Swan" uma aysan helin qaybinta beerahayaga. Dhirta ayaa ah mid hooseeya, miro dhexdhexaad ah oo aan midab lahayn. Dhadhanka waa lime yar, boodh, dhadhan aan caadi ahayn strawberry.
Iyadoo loo eegayo xajmigeeda yar, noocyada ugu fiican ee koritaanka guriga. Waxay u dulqaadataa dhaxan iyo cudur. Diidmada waraabinta, laga bilaabo qalajinta ayaa dhiman karta. Daryeelka haboon, ee ku nool aqalka, wuxuu awoodaa in uu siiyo miro dhan sannadka.
Fasalka "Guud Dhexe" - mid ka mid ah noocyada ugu horreeya ee strawberries. Berry waa midab casaan leh oo leh dhalaal qurux badan, qaab muuqaal ah, oo aad u dheer. Waxay bixisaa celcelis dhalid. Si aad u dhadasho macaan iyo dhanaan.
Kala duwan ayaa jecel sunshine, sababtoo ah cufan yar ee baadiyaha, waxaa la kori karaa ma aha oo kaliya beerta, laakiin sidoo kale on windowsill ama balakoonka ee ubaxyo gaar ah.
Marka laga soo qaado magaca, waxaa la fahmi karaa in kala duwanaantani ay soo saarto miraha midab huruud ah. Muuqaalku wuxuu la mid yahay miro kulul oo casaan ah, laakiin qaabka loo yaqaan 'conical elongated' iyo qaabka jaalaha ah ayaa si fiican u kala saaraa. Berry waxay dhadhanayaan sida cananaaska.
Kala duwanaanshaha qorraxda waxay u dulqaadanaysaa qorraxda, maahan mid gabi ahaanba ka soo jeeda waraabinta, waxay u kori kartaa wakhti inta lagu jiro abaarta iyada oo aan lumin wax soo saar. Iyada oo caawimaadda "Miracle Yellow" waxaad si quruxsan u qurxin kartaa beertaada. Kalluunka yaryar, oo lagu daboolay miraha aan caadiga ahayn, waxay noqon doontaa quruxda fiican ee muuqaalka.
Rügen waa noocyo kala duwan oo Jarmal ah oo kala duwan, oo leh taariikh ku saabsan 100 sano. Kala duwanaansho ayaa loo jeexjeexay jasiiradda isla magaca Badda Badda. On mid ka mid ah dhirta waxay noqon kartaa ilaa 100 miraha, taas waxaa sabab u ah caleenta fara badan. Dhirta strawberry Rugta waa isdhex gareeyeen iyo Bloom ilaa Oktoobar, taas oo u oggolaanaysa in lagu naqshadeeyo guriga oo loo isticmaalo sida xilli-kulaylka oo dhan. Sababtoo ah qabsashada nalalka iftiinka, noocyada kala duwan ayaa si guul leh loogu ridi karaa dhismaha.
Strawberry Tani si fiican u koraa jawiga ee aagga dhexe iyo waa mid aad u fiican oo ka dhan ah noocyada cudurada. Berrygu waa cufan yahay oo waxoogaa huruud ah gudaha. Haysasho dhadhan fiican iyo urta strawberry.
Strawberries "Ruiana" waa wakiil qoyska reer Czech ee tarlings strawberry. Kala duwanaanta noocaas ah ayaa ku habboon meelaha ay ku badan yihiin roobabka. Ciidda loogu talagalay strawberry waa in si fiican loo miiray. Geedka, oo ka duwan kuwa dhiggooda ah, wuxuu leeyahay difaac dabiici ah oo ka yimaada kalluunka casaanka, gaar ahaan haddii uu habitatku furan yahay. Sababtoo ah xaqiiqda ah in kala duwan u horumariyo si fiican ee shimbiraha xoog leh, waxaa lagu beeray karaa xataa xitaa hoosta geedaha.
Kala duwan Tani waa nooca berry ah oo kareem ah, ku yaal kor ku caleemaha, taas oo u ogolaanaya iyaga si aysan u heli karin wasakh on dhulka. Wixii qudaar strawberries wanaagsan u baahan tahay waraabka oo tayo sare leh oo tayo sare leh. Haddii qoyaanku uusan ku filneyn, dhalidda iyo tirada xarriiqda sanadka soo socda ayaa si weyn u yaraada.
Thanks to kala duwan fasax, waxaan ka heli kartaa noocyo badan oo strawberries beerta. Tani waa noocyo kala duwan oo isku dhafan oo strawberries ah, kaas oo muddo dheer la ogaa qof walba waana la nadiifiyey Maraykanka. Dhallin yar oo 30-centimeter ah waxay soo saartaa miraha 12-garaam oo isku mid ah oo ay u eg yihiin strawberries beerta. Qaabka qaab-beereedku waa shuban-qaabeeya geesaha wareegsan, miraha ayaa lagu soo gaabiyaa saxarka. Kala duwanaanshahan waxaa loo tixgeliyaa macmacaanka. Cawska wuxuu bilaabmaa Bilaha 7aad iyo 8aad.
Kala duwan tani waxay leedahay dhalid aad u sarreeya. Kuurku wuxuu ku filan yahay difaaca iftiinka iyo cayayaanka.
Noocyo aan lahayn strawberries remoban remoban iyo strawberries
Hoos waxaa ka mid ah noocyada ugu caansan ee strawberries remontant remontant:
Blero, oo ah noocyo kala duwan oo strawberry ah, ayaa lagu soo riday Boqortooyada Ingiriiska dhammaadkii qarnigii labaatanaad by beeralayda ka socotay East Malling Research. Buuryadu waa yar tahay, si tartiib ah u kobcaya, oo ku habboon taranta. Berry waa weyn (qiyaastii 35 mm dhexroor), aad u macaan. Bushku wuxuu dhalin karaa 5 sano.
Strawberry "Bolero" - mid ka mid ah kuwa ugu adkaysi u ah isbedelka cimilada. Heerka iyo abaarta ma saameynayaan baaxadda, tayada iyo tirada miro. Waxay leedahay difaac wanaagsan noocyada kala duwan ee fungi iyo caaryada.
"Vima Rina" waxaa loola jeedaa noocyada kala duwan ee noocyada qudaarta Nederlandka ah, kala duwanaantani waxay calaamad u tahay baadiyaha awood leh tiro badan oo caleemo ah. Peduncles waxay ku koraan heerka caleen. Miraha "Vima Rina" waxay ka bilaabantaa badhtamaha June illaa bilowga barafka, iyada oo ku xiran koritaankeeda dhulka. Berry waa weyn, xiran yahay qaab, oo ku saabsan 75 g, dhadhanka waa jilicsan, macaan-macaan. Kala duwan ayaa u adkaysata abaarta iyo cayayaanka.
Liubasha "Lyubasha", sida laga yaabo inay macquul tahay magac, waxay ka timid Ruushka. Kala duwan ma koraan marka uu dhoobo, daboolay ubax cad. Y "Lyubashi" strawberries waaweyn, aad u macaan, si qumman loo xusay strawberries duurjoogta. Fruiting wuxuu bilaabmaa Juun wuxuuna soconayaa ilaa uu barafoobo.
Kala duwanaantu waxay u dulqaadaneysaa cimilada qaboobta, si degan waxay u adkeysaa caadooyinka qallalan iyadoo aan la lumin tayada sare ee berry. Ma aha mid u adkeysanaya cayayaanka.
Strawberry wuxuu leeyahay muuqaal soo jiidasho ah, taas oo ay ugu mahadcelineyso dadka intooda badan waxay ku koraan dariishadahooda buuraha. Waxay abuureysaa cagaar dheeraad ah oo guriga ah waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si joogto ah u isticmaasho beruud cusub oo la isticmaalo.
Kala duwanaanshaha "Merlan F1" waa dhexjir ah beerta cawska leh ee xayawaanka beeraha ee Switzerland. Ka mid ah dhammaan noocyo waaweyn-fruited "Merlan F1" wuxuu leeyahay istaandarro weyn. Waxyaabaha kala duwan waxay u dulqaadanayaan dhirtii si fudud, kama baqeyso weerarrada fayraska iyo cayayaanka.
Keli ahaan, kaynta "Merlan F1" waa mid yar, isafgarad ahaan, muuqaalka tiro yar oo ka mid ah antennae ayaa suurtagal ah. Waxaa ubaxyada ubaxyada leh ubaxyo casaan ah. Miraha of size dhexdhexaad ah (aan ka badnayn 20 g), conical iyo aad u macaan.
Strawberry waa ku habboon beerashada, aan qabyo ahayn, waa noocyo ku haboon ee bannaanka u janjeersaday.
Kala duwanaanshaha "Selva" (wakiilka xulashada Czech) ayaa iska leh noocyada caadiga ah ee strawberries. Tani waa noocyo badan oo si ballaadhan loogu qaybiyo guryaha lagu koriyo oo lagu iibiyo dukaamada. Midhaha "Selva" oo miro waaweyn, gaaraya 70 garaam iyo wax ka badan. Qaabka miro ayaa ah mid aan simaneyn, oo xiran. Waxay leeyihiin dhadhan dhan sabab u ah qadar yar oo sonkor ah.
Iyadoo ku saleysan kala duwanaanshahan, in ka badan toban nooc oo hybrid ah ayaa la jaray. Dhammaan sababtoo ah caabbinta sare ee fungi iyo cayayaanka, iska caabinta barafka wanaagsan iyo wax-soosaarka sare.
Waa muhiim! Kala duwanaantu ma aha mid u dulqaadanaysa kuleylka, waa inay noqotaa mid joogto ah oo si weyn u waraabiyo.